Iindaba-Ukungeniswa kwe-gabion net
Intshayelelo yenethi yegabion
Umnatha weGabion ungasetyenziselwa ukuxhasa ithambeka, ukuxhasa umngxuma wesiseko, ukutshiza ikhonkrithi yomnatha we-gabion kumphezulu wamatye, utyani oluthambekileyo (ukwenza uhlaza), umzila kaloliwe kunye neendlela zokubodwa ezihamba wedwa, kwaye zinokwenziwa zibe ziziba kunye neemethi zokukhusela imilambo, amadama neelwandle, kunye neekheji ezisetyenziselwa ukuvala amadama kunye nemilambo. Eyona ntlekele imbi yemilambo kukutshatyalaliswa kweebhanki zemilambo ngamanzi, zibangele izikhukula, zibangele ilahleko enkulu yobomi kunye nepropathi kunye nokhukuliseko lomhlaba. Ke ngoko, xa kusonjululwa ezi ngxaki zingasentla, ukusetyenziswa kweminatha yegabion ibe sesinye sezona zisombululo zibalaseleyo, ezinokukhusela umphezulu webhedi yomlambo kunye nebhanki.
1. Isakhiwo esiguquguqukayo sinokuziqhelanisa notshintsho kwithambeka ngaphandle kokonakaliswa, kwaye sinokhuseleko olungcono kunye nozinzo kunesakhiwo esiqinileyo;
2.Ukuba namandla okulwa nokukrwela, kunokumelana nokuhamba kwamanzi okuphezulu kwe-6m / s;
3. Ubume ngokwemvelo bunokungena emanzini kwaye buyanyamezeleka kwiziphumo zendalo kunye nokucoca amanzi aphantsi komhlaba. Izinto eziqinileyo ezinqunyanyisiweyo kunye nomsila emanzini ungagcinwa kwimfumba yelitye, evumayo ekukhuleni kwezityalo zendalo kwaye ngokuthe ngcembe ibuyisele imeko yendalo esingqongileyo.
Umnatha we-gabion wenziwe ngocingo lwentsimbi okanye umnatha wocingo lwe-polymer, onokulungisa ilitye kwindawo efanelekileyo. Ikheyiji yocingo sisakhiwo esenziwe ngocingo olukiweyo okanye nge welding. Ezi zakhiwo zimbini zinokufakwa kwi-electroplated, kwaye ibhokisi yocingo eboyiweyo inokongezwa nge-PVC. Sebenzisa iliwa elinzima elinganyangekiyo kwimozulu njengokugcwalisa, ayizukuqhekeka ngokukhawuleza ngenxa yokunxiba kunye nokukrazula kwesinki kwibhokisi yelitye okanye i-gabion. Iigabions ezineentlobo ezahlukeneyo zamatye ebhloko aneempawu ezahlukeneyo. Amatye polygonal angadibaniswa kakuhle, kwaye ikheyiji yelitye elizaliswe ngawo ayilunganga lula.
Kwinjineli yomhlaba, ukhuselo lwethambeka kuhola wendlela, ukhuselo lwedama kunye nokubuyiselwa kwethambeka lentaba kuhlala kuyintloko yeenjineli kunye neengcali. Iminyaka emininzi, bebejonga indlela yezoqoqosho kunye neyona ndlela ifanelekileyo engakwaziyo ukufikelela kwiimfuno zokukhusela intaba kunye nolwandle, kodwa ikwafezekisa nefuthe lokutyala okusingqongileyo. Ngokuthe ngcembe, obu buchwephesha baqala ukubonakala, bubuchwephesha besicelo seminatha yegabion yendalo.
Iimveliso ze-gabion net zahlukile, ubukhulu becala zisetyenziselwa ukukhusela ithambeka kunye nokugcina iindonga, ukhuseleko lwebhulorho, ukhuseleko lomlambo, ukhuseleko kwendlela, ukhuselo lwamathambeka ecaleni, ukuphuculwa kwethambeka lomlambo kwibhanki kunye nezinye iiprojekthi.
Ixesha Post: Aug-08-2020